Pistorius will appeal murder conviction to South Africa's highest court - HoustonChronicle.com
Pistorius will appeal murder conviction to South Africa's highest court
ASSOCIATED PRESS Dec. 8, 2015
Pistorius will appeal murder conviction to South Africa's...
1of26Oscar Pistorius, left, speaks with his defense lawyer Barry Roux at the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius wants to take his case to the Constitutional Court, challenging an appeals court that convicted him of murdering girlfriend Reeva Steenkamp, the Olympian's lawyer said. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)Photo: Siphiwe Sibeko, POOL
2of26Oscar Pistorius, left, speaks with his defense lawyer Barry Roux at the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius wants to take his case to the Constitutional Court, challenging an appeals court that convicted him of murdering girlfriend Reeva Steenkamp, the Olympian's lawyer said. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)Photo: Siphiwe Sibeko, POOL
3of26Oscar Pistorius covers his face in the dock at the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius wants to take his case to the Constitutional Court, challenging an appeals court that convicted him of murdering girlfriend Reeva Steenkamp, the Olympian's lawyer said. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)Photo: Siphiwe Sibeko, POOL
4of26Oscar Pistorius covers his face in the dock at the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius wants to take his case to the Constitutional Court, challenging an appeals court that convicted him of murdering girlfriend Reeva Steenkamp, the Olympian's lawyer said. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)Photo: Siphiwe Sibeko, POOL
5of26Oscar Pistorius sits in the dock in a courtroom at the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius wants to take his case to the Constitutional Court, challenging an appeals court that convicted him of murdering girlfriend Reeva Steenkamp, the Olympian's lawyer said. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)Photo: Siphiwe Sibeko, POOL
6of26Chief state prosecutor Gerrie Nel sits in a courtroom where Oscar Pistorius appears in the High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
7of26Oscar Pistorius, left, talks with his defense lawyer Barry Roux in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)Photo: Siphiwe Sibeko, POOL
8of26Oscar Pistorius sits in the dock at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Siphiwe Sibeko, Pool)Photo: Siphiwe Sibeko, POOL
9of26Oscar Pistorius, center, consults with his defense team in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
10of26Oscar Pistorius, right, confers with his defense lawyer Barry Roux in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
11of26Oscar Pistorius arrives at the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday, Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in a South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Themba Hadebe)Photo: Themba Hadebe, STF
12of26Oscar Pistorius arrives at the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday, Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in a South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Themba Hadebe)Photo: Themba Hadebe, STF
13of26Oscar Pistorius, center, consults with his defense team in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
14of26Oscar Pistorius sits in the dock at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
15of26Oscar Pistorius sits in the dock at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
16of26Oscar Pistorius, right, consults with his defense lawyer Barry Roux in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
17of26Oscar Pistorius, right, consults with his defense lawyer Barry Roux in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
18of26Oscar Pistorius, right, consults with his defense lawyer Barry Roux, center, in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
19of26Oscar Pistorius, right, consults with his defense lawyer Barry Roux in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
20of26Oscar Pistorius consults with legal team members in a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
21of26Oscar Pistorius arrives at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
22of26Oscar Pistorius arrvies at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
23of26Oscar Pistorius arrvies at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
24of26Oscar Pistorius sits in the dock at a courtroom of the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
25of26Oscar Pistorius arrives at a courtroom of North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in the South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Herman Verwey, Pool)Photo: Herman Verwey, POOL
26of26Oscar Pistorius arrives at the North Gauteng High Court in Pretoria, South Africa, Tuesday, Dec. 8, 2015. Pistorius arrived in a South African courtroom, where he is expected to apply for bail following his conviction for murdering girlfriend Reeva Steenkamp. (AP Photo/Themba Hadebe)Photo: Themba Hadebe, STF
As Pistorius sat in the courtroom, defense lawyer Barry Roux unveiled the plan to take the sensational murder case to an 11-judge court known for abolishing the death penalty and affirming basic human rights after the 1994 end of white minority rule in South Africa.
If the Constitutional Court chooses not to hear the case, Pistorius will be back in a lower court on April 18 for the start of a sentencing process, meaning he will remain under house arrest for at least the next several months.
On Tuesday, Pistorius was granted bail of the equivalent of $692 in South African currency - he paid an amount 100 times higher when he first appeared in court for the shooting.